Android အတွက် Download လုပ်မကျြနှာကိုတိုက်ရိုက်ဝေါလ်ပေပါ APK ကို analog နာရီ & စောင့်ကြည့်
ပင်မစာမျက်နှာ » တိုက်ရိုက်နောက်ခံများ » မျက်နှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံ analog နာရီ & စောင့်ကြည့်
analog နာရီ & စောင့်ကြည့်မျက်နှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေါလ်ပေပါ APK ကို
သငျသညျ 3D အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ Multi-အလွှာ Parallax နောက်ခံရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်ဝေါလ်ပေပါသင့်ရဲ့ဖုန်းပိုပြီးတော်တော်လေးနှင့်အထူးစေမည်ဤသည် analog နာရီ! ဤတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နောက်ခံပုံများ, Parallax အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်တကွကြွလာ။
3D အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူနောက်ခံ -Stunning
3D & HD ကိုတိုက်ရိုက်နောက်ခံပုံများ၏ -a ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်း။
ဤအတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ download လုပ်ရန် -Free ။
devices များ -Support အများစု
- ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူ, Animated မြေပြင်တင့်တယ်
ထောက်ပံ့နောက်ခံရွေ့လျားအခမဲ့ HD တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံ themes များ၏ -a အမျိုးမျိုး။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ဖုန်းကိုစိတ်ကြိုက်အခမဲ့ HD ကိုတိုက်ရိုက်နောက်ခံများအများကြီးပေး။
သင်တစ်ဦးချစ်ခြင်းမေတ္တာသဘောသဘာဝတွေဟာလျှင်, ငါတို့သည်ရေတံခွန်, မိုးရွာရွာ, ငါးမွေးကန်များနှင့်သမုဒ္ဒရာဆောင်ပုဒ်နောက်ခံရှိသည် ဖြစ်. ,
သင်တစ်ဦးသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကိုနှစ်သက်ကြသည်လျှင်, သင်မှော်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဂါးငွေ့တန်းညဥ့်နဲ့ Analog နာရီစတိုင်နောက်ခံပုံများနှင့်နောက်ခံကိုချစ်လိမ့်မယ်, သင်သည်ထိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်။
သငျသညျတိရိစ္ဆာန်များကိုကြိုက်လျှင်သင်ထိုကဲ့သို့သောဒီနေရာမှာကြောင်နဲ့ခွေးသို့မဟုတ်အေးမြခြင်္သေ့နှင့်ဝံပုလွေနောက်ခံပုံ themes များအဖြစ်ချစ်စရာတိရိစ္ဆာန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ငါတို့သည်လည်းသင်တို့အဘို့အထူးဗွီဒီယိုကိုတိုက်ရိုက်နောက်ခံပုံများရှိသည်။ ကာတွန်းရာသီဥတုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ, အမျှရာသီဥတုနောက်ခံသတ်မှတ်ထား
လူတိုင်းတိုက်ရိုက်နောက်ခံများနှင့်အတူသူတို့အကြိုက်ဆုံးနောက်ခံပုံများနှင့်နောက်ခံ (Home Screen နောက်ခံပုံရိပ်) ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
★မှတ်ချက်: သင်၏နောက်ခံပုံ reboot ပြီးနောက် default ဖို့ရဖို့အတွက်လျှင်, သင်ဖုန်းကိုအစား SD ကဒ်ပေါ်မှာ app ကိုဝတ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ★
မျက်နှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံ analog နာရီ & စောင့်ကြည့်
11.52 ကို MB